खेलकुदको इतिहास बोकेको दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण कहिले सकिन्छ ? « News24 : Premium News Channel
खेलकुदको इतिहास बोकेको दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण कहिले सकिन्छ ?
काठमाडौं, ३ कात्तिक । दशरथ रंगशला नेपाली खेलकुदको इतिहास हो । नेपालको प्रतिष्ठा हो । तर, त्यही रंगशाला तीन वर्षयता जीर्ण अवस्थामा छ । भूकम्पले थल्थिलिएको यो रंगशालाको पुनर्निर्माण यति सुस्त भयो कि अर्को वर्षसम्म पनि यसको निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । रंगशाला पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइकै कारण १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद सर्ने निश्चित भएको छ ।
यो दशरथ रंगशाला । नेपालको ६० वर्षे खेलकुद इतिहास बोकेको यो रंगशाला नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशाला हो । रंगशालाको यो दुर्दशाले नेपाली खेलकुदको अवस्था देखाउँछ । नेपालमा आयोजना हुने सबैजसो ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको साक्षी बनेको यो रंगशालामा तीन वर्षयता कुनै गतिविधि भएको छैन ।
अहिले पनि यसको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । साधारण प्याराफिट पुनर्निर्माण गरिएको छ । भीआईपी प्याराफिटको छत हटाइएको छ । अब स्कोर बोर्ड बनाउनुपर्ने छ भने एथ्लेटिक्स ट्र्याक पनि मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
२०१३ सालमा दशरथ रंगशालाको पहिलो खाका तयार भएको थियो । त्यसयता पटक पटक यसलाई स्तरोन्नति र मर्मत गरिएको छ । गत सेप्टेम्बरमा चीनलाई हस्तारण गर्ने भनिए पनि यसलाई पुनः दुइ महिना पछि सारिएको छ । यस आधारमा पनि जवसम्म चीनलाई थप कामको लागी जिम्मेवार हस्तारण गरिदैन तव सम्म निमार्णको कामले गति लिएको मान्न सकिन्न ।
लामो समय रगशाला नबन्दा अव त नेपाली खेलकुदको रौनक र सम्मान पनि कम भएको हो कि भन्ने खेलबिज्ञको अनुमान छ । घरेलु मैदानमा रगशालाकै कारण प्रतियोगिता नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार खेलाडीमा परेको छ । रंगशाला कहिलेसम्म बनिसक्छ त ? सुस्त गतिमा भइरहेको पुनर्निर्माणको अवस्थाले रंगशाला तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा कसैले विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।